မြန်မာ့သတင်း - PNG MYANMAR
“သမီးကို မိဘတွေက ကျောင်းဆက်မထားနိုင်တော့တဲ့ အဖြစ်ဆိုတော့ လူပွဲစားကလည်း ရပ်ကွက်ထဲမှာ ထိုင်းကို သွားပြီး ...အလုပ်လုပ်ဖို့ မက်လုံးပေးစည်းရုံးတာကို အိမ်က ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ထည့်လိုက်တာပါ။ စရိတ်ငြိမ်း ခေါ်လာတဲ့အပြင် အိမ်ကိုလည်း ကျပ်တသိန်းခွဲ ကြိုပေး ခဲ့တော့ အဲ့ဒ်ီကနေအစပြုပြီး မဲဆောက်မှာ အရောင်းစားခံရပြီး ဒ်ီဘ၀ကို ရောက်လာရတာပါ။ ဒီအလုပ်လုပ်ဖို့ တခါမှ မစဉ်းစားခဲ့ပါဘူး။ အခုတော့လည်း မိသားစုအတွက် အနစ်နာခံရတယ်လို့ပဲ သဘောထားလိုက်တော့တယ်” ဟု ပြောသူမှာ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် မဲဆောက်မြို့မှ အသက် (၁၆)နှစ်အရွယ် ပဲခူးမြို့သူတဦးဖြစ်သည်။
မဲဆောက်ရှိ တည်းခိုခန်းတခုတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ကိုအောင်က “ခေတ်စနစ်က မကောင်းတော့ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေလည်း စာရိတ္တဆိုတာ ဘာလည်းမသိတော့ဘူး၊ အဆိုးအကောင်းလည်း မသိကြတော့ဘူး။ ကျနော်တို့ တည်းခိုခန်းမှာဆိုရင် ဧည့်သည်က မြန်မာမိန်း ကလေးလိုရင် ခေါ်ပေးရတယ်။ လာပို့တဲ့သူက ဆိုင်ကယ်နဲ့လာတယ်၊ လာတာက သုံးယောက်။ ကလေးက (၁)နှစ်ကျော်ကျော်ပဲ ရှိသေးတယ်။ မိဘတွေနဲ့အတူလာတယ်၊ ဆိုင်ကယ်မောင်းတာ က အဖေ၊ အမေလုပ်သူက ပြည့်တန်ဆာဆိုတော့ ဧည့်သည်နဲ့ အခန်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာအဖေလုပ်တဲ့သူက ကလေးကိုနို့ဘူးတိုက်ပြီး အပြင်ကစောင့်တယ်။ ကလေးအမေ အခန်းတက်ပြီးတာနဲ့ သားအမိ၊သားအဖသုံးယောက် ဆိုင်ကယ်နဲ့အတူတူ ပြန်သွားကြတယ်။
အဲလိုပဲ အမေနဲ့ သမီး ပြည့်တန်ဆာရုံ တရုံထဲမှာအတူတူ အလုပ်လုပ်ကြတာလည်းရှိတယ်။ မဲဆောက်မှာ ကျနော်တို့ မြန်မာတွေရဲ့ အဖြစ်ကတော့ ပြောလို့တောင် ယုံနိုင်စရာမရှိတဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်ကုန်ပြီ” ဟု ပြောသည်။
သတင်းများ G Talk မှ အလွယ်တစ်ကူဖတ်နိုင်မည်
GTalk မှ နောက်ဆုံးရ မြန်မာသတင်းများ ဖတ်နိုင်ပြီပြည်တွင်း၌ တရားဝင်ထုတ်ဝေနေသည့် ဂျာနယ်များမှ ရရှိသည့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုG Talk အသုံးပြုသူများ အချိန်မရွေးဖတ်ရှု နိုင်မည့်စနစ် မြန်မာအင်တာနက်မှ စတင်လိုက်ပြီဟု သိရသည်။ သတင်းဖတ်ရှုလိုသူများ သည် မိမိ G Talk တွင် friends. myan-mar.burma@ gmail.com
ကို မိတ်ဆွေစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းထားရမည်ဖြစ်သည် ထိုမိတ်ဆွေအမည်ကို ပုံမှန်စာရိုက်၍ စကားပြောသကဲ့သို့ စာတစ်ခုခုရိုက်ထည့်၍ Enter နှိပ်လိုက်ပါက နောက်ဆုံးရ သတင်း ၁ဝ ပုဒ်ကို ချက်ချင်းထုတ်ပြပေးမည်ဖြစ်သည်။ ၄င်းသတင်းများကို နေ့စဉ် ပုံမှန်ထွက်ရှိနေသည့် ပြည်တွင်းထုတ် ဂျာနယ်များမှရွေးကာာ myanmar- myanmar. net မှ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ”သိသင့်သိထိုက်တဲ့သတင်းတွေကို ရွေးဖော်ပြပေးမှာပါ။ ဖော်ပြရင်လည်း တစ်ပုဒ်လုံးမဟုတ်ဘဲ အဓိက အကြောင်းအရာပဲ ဖော်ပြမှာပါ။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း နည်းပညာပိုင်း လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့ အတွက် နည်း ပညာပိုင်းမှာ သိသင့်တဲ့ဟာတွေကိုလည်း ဘာသာပြန်ပြီး ထည့်ပေးမယ်” ဟု မြန်မာအင်တာနက်မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက သတင်းတင်ပြမှုနှင့် ပတ် သက်၍ ရှင်းပြသည်။ ပြည်ပရောက် မြန်မာအများစုအနေဖြင့် ပြည်တွင်းသတင်းဂျာနယ်များမှ သိသင့်သိထိုက်သည့် သတင်းများကို ဖတ်ရှုနိုင်ရန် တင် ပြပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ပြည်တွင်းထုတ် သတင်းဂျာနယ်များမှ စိစစ်ရေးခွင့်ပြုချက်ရ သတင်းများကို ဖော်ပြသည့် သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် www. myanmar-myanmar.net မှ နေ့စဉ်သတင်းဂျာနယ်ပေါင်းစုံမှ သတင်းများကို အခမဲ့ဖတ်ရှုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
(ယခုအထိတော့ invite လုပ်လို့မရသေးပါ မြန်မာပြည် အင်တာနက်အခက်အခဲကြောင့်ဟုထင်ပါသည်။)
အိမ်အမြန်ဆောက်လိုသူများအတွက် အဆင်သင့် တပ်ဆင်ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်မည့် အိမ်များကို ဈေးကွက်၌ အသုံးပြုလာပြီ ရက်ပိုင်းအတွင်း အိမ်တစ်လုံး အမြန်ဆောက်လုပ်ရမည့် သူများအတွက် မှာယူသည့် အချိန်မှစတင်ကာ တစ်ရက် အတွင်း အပြီး တပ်ဆင် တည်ဆောက်ပေးနိုင်သော Modular Building System ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း စနစ် သုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်ကာ လတ်တလော လူအများ စိတ်ဝင်စားမှု ရှိနေကြောင်း စုံစမ်း သိရှိရသည်။ အဆိုပါစနစ်မှာ ဓာတုဗေဒနှင့် ရူပဗေဒနည်းပညာ ဘာသာရပ်များတွင် သင်ကြားခဲ့ရသော မော်လီကျူး နည်းပညာဖြင့် ကွင်းဆက်သဏ္ဌာန် အိမ်အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ခြင်း မျိုးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ လက်ရှိကာလတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နည်းပညာဖြင့် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုက တင်သွင်းလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရပြီး ဈေးကွက်အတွင်းသို့ ယခုနှစ်အတွင်းမှ စတင်ဝင်ရောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ''ပြည်တွင်းကို ဒီနှစ်ထဲမှာမှ စပြီးရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြပွဲမှာ ပြသတာနှစ်ကြိမ်ရှိပါပြီ။ အခုဆိုရင် စုံစမ်းသူတွေ နေ့စဉ်များလာတယ်။ လတ်တလောမှာ ကျောင်းတွေ၊ တိုက်ခန်းတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတွေက မှာထားတာတွေရှိသလို တပ်ဆင်နေတာတွေလည်း ရှိလာပါပြီ။ ရောင်းရတဲ့အလုံးရေကို ပြောပြလို့မရပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ တင်လာသမျှ ၈ဝ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရောင်းချနေရပါပြီ'' ဟု အဆိုပါ မော်လီကျူး အိမ်ကို တင်သွင်းသည့် Hi Cool ကုမ္ပဏီမှ MD ဦးသူရိန်ဦးက ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ အဆောက်အအုံသည် အပူဒဏ်၊ အအေး ဒဏ်နှင့် ရာသီဥတုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိ သည်ဟု သိရပြီး Moblie စနစ် ရွှေ့လျား နိုင်ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ''ဒီမြေမှာ မကြိုက်လို့အခြား မြေ နေရာတစ်ခုကို သွားဆောက်မယ်ဆိုရင် လည်း ဖြုတ်ပြီးရွှေ့လို့ရတယ်။ အထပ် အမြင့်တွေလည်း ဆောက်လို့ရတယ်။ သဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ ပြောရရင် သူက မြေမှာချထားသလိုမျိုးဆိုတော့ လေတိုက်တာ ငလျင်လှုပ်တာ ကိုမမှုဘူးဗျ။ ဒီထဲက တံခါးပေါက်တွေကိုလည်း လိုသလိုရွှေ့လို့ရတယ်'' ဟု ယင်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ အဆိုပါ မော်လီကျူးအိမ်ကိုစတီးနှင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ၄င်း၏ပြုပြင်တပ်ဆင်မှုအတွက် အမြန်ဆုံးလုပ်ဆောင်လျှင် တစ်ရက်နှင့်ပင် ပြီးစီးမည်ဟု သိရသည်။
ကျိုက္ခမီရေလယ် ဆံတော်ရှင်ဘုရားနှင့် မုဒုံကန်ကြီး စေတီတော် တို့၏ ဗုဒ္ဓပူဇနိယ ပူဇော်ပွဲတော်
ပွင့်လင်းရာသီ မွန်ပြည်နယ် တောင်ဘက်၏ အစောဆုံးပွဲတော် ဖြစ်သည့် ကျိုက္ခမီရေလယ် ဆံတော်ရှင်ဘုရားနှင့် မုဒုံကန်ကြီး စေတီတော် တို့၏ ဗုဒ္ဓပူဇနိယ ပူဇော်ပွဲတော် တို့ကို ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများဖြင့် အစဉ်အလာမပျက် သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့မှ စတင် ကျင်းပရာ ဒေသခံ ဘုရားဖူးများ၊ မြန်မာပြည် အရပ်ရပ်မှ ခရီးသွား ဘုရားဖူးများဖြင့် စည်ကားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ''ကျိုက္ခမီဘုရားပွဲ အကြိုညကနေ မိုးရွာတာ လပြည့်နေ့နံနက် ဆွမ်းအိုးမျောချိန်ထိပါပဲ။ ဆွမ်းတော်တင် ဆွမ်းအိုးမျောပွဲကို မိုးရွာနေတဲ့ကြားက မျောရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်မျောတဲ့ ဆွမ်းအိုးလေးဟာ ဖယောင်းတိုင်မီး မငြိမ်းဘဲ လှိုင်း လေ၀ဲတွေကြား လိုရာခရီးကို လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် ရောက်သွားဖို့ တိုင်တည်ဆုတောင်းတာ မွန်တွေရဲ့ ယုံကြည်မှုပါ။ အဝေးမှာ အလုပ်လုပ် နေကြတဲ့ သားချင်းမောင်ဖွား ချစ်သူတွေကို ကောင်းရာမွန်ရာ အန္တရာယ်ကင်းရာ ပို့ဆောင်ပေးကြပါလို့ ဆု တောင်းမေတ္တာ ပို့ကြရတာ လပြည့်နေ့နံနက်ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အတွေ့လေးပါပဲ''ဟု တိုင်းရင်းသူ မွန်ပျိုဖြူလေးက ပြောသည်။
ကျိုက္ခမီမှအပြန် စက်စဲကမ်းခြေ သောင်ပြင်ကျယ်တွင် အပန်းဖြေ ရေကူးကာ ပင်လယ်စာ စားသုံးခြင်း၊ လတ်ဆတ်သည့် အုန်းစိမ်းရေ သောက်ခြင်းဖြင့် တစ်နှစ်တာအတွက် အပန်းဖြေရသည်မှာ ပျော်ရွှင်ကြောင်း အပန်းဖြေ ခရီးသွားတစ်ဦးက ပြောသည်။
မြန်မာပြည် အရပ်ရပ်မှ ဘုရားဖူးကားများသည် ကျိုက္ခမီ၊ စက်စဲမှအပြန် နာမည်ကျော် သေမင်းတမန် ရထားလမ်း၏ သံဖြူဇရပ် စစ်သင်္ချိူင်းကို လေ့လာကာ မုဒုံကန်ကြီးစေတီ မြန်မာ့ရိုးရာ လှေသဘင် ငါးတက်ပြိုင်ပွဲကို ကြည့်ရှု၍ ၀င်းစိန်တောရ အတောင်လေးရာ လျောင်းတော်မူ ဘုရားကိုဝင်ပြီး မော်လမြိုင် တောင်ရိုးတန်းရှိ ဦးခန္တီ၊ ဦးဇိန၊ မဟာမြတ်မုနိ၊ ကျိုက်သလ္လန်ဘုရား တို့ကို ၀င်ရောက် ဖူးမြော်လေ့ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၏ မြို့တော် တောင်ကြီးမြို့တွင် နှစ်စဉ် သီတင်းကျွတ် ပွဲတော်ကို ကျောင်းတက်ပွဲများ၊ မီးပုံးပျံလွှတ်ပွဲများ၊ မီးကျည်စမ်းပွဲများဖြင့် စည်စည်ကားကား ကျင်းပလေ့ရှိရာ ယခုနှစ်တွင် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း ဂီရိ၏ အဖျားခတ် အရှိန်ကြောင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ မိုးရွာသွန်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သဖြင့် သီတင်းကျွတ် အဖိတ်နေ့၊ လပြည့်နေ့များတွင် စည်ကားခြင်း မရှိဘဲ သီတင်းကျွတ် လပြည့်ကျော် တစ်ရက်နေ့တွင်သာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတက်သူများ၊ ညပိုင်းတွင် မီးပုံးပျံလွှတ်၊ မီးကျည်စမ်းပွဲများ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။ ''ကျွန်တော်တို့ ဒေသမှာ ကျောင်းတက်ပွဲဆိုတာက မိမိတို့ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကို မိသားစု အလိုက်၊ အဖွဲ့အစည်းအလိုက်၊ ရပ်ကွက်သူ၊ ရပ်ကွက်သား၊ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားတွေ စုပြီး၊ ခြေလျင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ထုပ်ထုပ် (သုံးဘီးဆိုင်ကယ်)၊ မော်တော်ကားတွေနဲ့ အိုးစည်ဗုံမောင်းတီးပြီး သံဃာတော်တွေ အတွက် အဆောင်ပစ္စည်းတွေ၊ ဒေသထွက် သီးနှံတွေကို ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကို သွားရောက် လှည့်လည် လှူဒါန်းကြတာကို ကျောင်းတက်ပွဲလို့ ခေါ်တာပါ''ဟု ဒေသခံတစ်ဦးက ရှင်းပြခဲ့သည်။
''မီးကျည်စမ်းပွဲ ဆိုတာက တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံ ပြိုင်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင် ပြုလုပ်နေတဲ့ မီးကျည်၊ မီးရှူး၊ မီးပန်းတွေရဲ့ အရောင်အသွေး၊ တောက်ပမှု၊ ဆွဲဆောင်မှု ရှိမရှိကို ဒီသီတင်းကျွတ် ပွဲတော်မှာ မီးပုံးပျံ အလတ်စားတွေနဲ့ ယမ်းခွေ တန်ဖိုးအလိုက် တစ်လုံးကို အနည်းဆုံး ကျပ်တစ်သိန်းကနေ ငါးသိန်းအထိ တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ ဒီနှစ် သီတင်းကျွတ်မှာ မီးကျည်စမ်းတဲ့ မီးပုံးပျံကော၊ အပျော်လွှတ်တဲ့ မီးပုံးပျံကော အလုံးငါးရာကျော် ရှိတယ်''ဟု မြို့ခံ မီးပုံးပျံ ကျွမ်းကျင် သူ တစ်ဦးက ပြောသည်။
ယနေ့ခေတ် အခြေအနေတွင် မြန်မာနိုင်ငံ တွင်နေထိုင်လျှက်ရှိကြသော မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများ ဖြစ်သော ထိုင်း ၊ မလေးရှား ၊ စင်ကပူ ၊တရုတ် အစရှိသော နိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသား မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များသည် မိမိတို့ နေထိုင်လျှက်ရှိသော နိုင်ငံထက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နိုင်ငံများသို့ သွားရောက် ရန် ဆန္ဒရှိကြသည်မှာ အမှား တခုဟု ပြောစရာမရှိသော်လည်း အွန်လိုင်းပေါ်တွင် တွေ့ဆုံရသော လူတယောက်အား အယုံလွယ်မိခြင်းကြောင့် ဆုံးရှုံးသွားကြရသော အရှက် သိက္ခာ များ အတွက်ကိုတော့ အင်မတန်မှ စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ် ခံစားရသလို ရှိလာသည့်အတွက် ဒီစာအား ရေးတင်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလန် နိုင်ငံ Sheffield မြို့သို့ လွန်ခဲ့သော9နှစ်ခန့်က ရောက်ရှိနေထိုင်လျှက်ရှိသော ဇော်ဝင်း (မြန်မာအမည်) (ခ)MR CHODHARY(အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားခံယူပြီးမှ ပြောင်းလိုက်သောအမည်) သည်
အွန်လိုင်းကို အသုံးပြု့ ကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နေထိုင်လျှက်ရှိသော အမျိုးသမီး ငယ်များနှင့် ထိုင်း . မလေးရှား ၊ စင်ကပူ ၊ တရုတ် အစရှိသော နိုင်ငံများရှိ မြန်မာ အမျိုးသမီးငယ်များအား
အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ လာနိုင်အောင် လုပ်ပေးမည်ဟု မက်လုံးများပေးကာ နှမချင်း မစာမနာစွာဖြင့် မဖွယ်မရာများကို ပြုလုပ်နေပါသည်။ ထိုသို့ အွန်လိုင်း sex လုပ်ထားသော စာသားများ၊ ဓါတ်ပုံများနှင့်
ဗီဒွီယိုဖိုင် အဖြစ် မှတ်တမ်းလုပ်ထားသော အရာများကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ရေးသားနေသော porn blog များသို့ မိမိ အမည်များ လွဲပြောင်းကာပေးပို့နေပါသည်။
ဇော်ဝင်း(ခ) MR CHODHARY သည် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Sheffield မြို့တွင် ဗမာအမျိုးသမီး မနီလာနှင့် ပေါင်းသင်းကာ
သား နှစ်ယောက် ဖခင်လည်း ဖြစ်ပါသည်။သို့သော် လွန်ခဲ့သော 1 နှစ်ခန့်က သူ၏ အမျိုးသမီး မနီလာနှင့် သားနှစ်ယောက်ကို အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Sheffield မြို့တွင် ထားရစ်ခါ သူ၏ မွေးဇာတိဖြစ်သော
ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ မိဘ များ နာမကျန်းဖြစ်သည်ဟု အကြောင်းပြကာ ပြန်သွားခဲ့ပါသည်။ ထို့သို့ ပြန်သွားပြီး မိမိနှင့် လူမျိုး ၊ ဘာသာတူသော မွတ်စလင် အမျိုးသမီးအား မိမိကိုယ် မိမိ လူပျိုဟု ပြောခါ
လက်ထပ် ပေါင်းသင်းခဲ့ပြန်ပါသည်။ ထို့နောက်တွင်တော့ အင်္ဂလန်နိင်ငံရှိ ဇနီးနှင့် သားများထံ ဟန်မပျက် ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ပြန်လာပြီး2လလောက်အကြာတွင်တော့ ဇနီးကြီးဖြစ်သူ
မနီလာမှာ မိမိခင်ပွန်းဖြစ်သူသည် မြန်မာပြည်ပြန်သွားစဉ်က နောက်ထပ် အိမ်ထောင်ပြုလာခဲ့သည်ကို သိရှိသွားပြီး လင်မယားကွာရှင်းလိုက်ကြပါသည်။
ဇော်ဝင်း(ခ)MR CHODHARY သည် ယခုအခါ မယားငယ်အဖြစ် ယူထားသော မွတ်စလင် အမျိုးသမီးအား သွေးဆောင် ဖျားယောင်း မက်လုံးပေးသလို မျိုး အွန်လိုင်းကို အသုံးပြု့ ကာ
မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်များအား ဖျက်ဆီး စော်ကားနေသည်ကို သိရှိနိုင်ကြပါရန် ရှောင်ရှား နိုင်ကြပါရန် ရေးသား ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်အကောင့် အားဖွင့် လိုက်မိချိန်တွင် နာမည်ကျော် ဒီဇိုင် နာ ဆရာမြင့်မောင်ကျော် share ပေးပို့ထားသော ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုချက် ချင်းပင်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မိသည်။
အကြောင်းအရာ ခေါင်းစဉ်ကပင် မဖွင့်ကြည့်ဘဲ မနေနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။
“ကောင်းကင်ပေါ်တွင်ဈာန်ကြွ နေသောရဟန္တာ” ဟူသည့်ခေါင်း စဉ်ဖြစ်ပါသည်။အဆိုပါ ဗီဒီယိုဖိုင် အားချက်ချင်း ပင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရူ လိုက် ချိန်တွင် ယင်းနေရာ ဒေသရှိ ဖူးမြော်သူတို့၏ အသံများနှင့် အတူ မြစ်ပြင် အထက် အတော်ခပ်လှမ်းလှမ်း ရှိရဟန္တာ ကိုယ်တော်မြတ် ဈာန်ဖြင့် ကြွနေသည် ကိုလွန်စွာ ဝေးကွာနေခြင်း ကြောင့် မသဲမကွဲ အနေအထားဖြင့် ဖူးတွေ့ လိုက်ရပါသည်။ ဗီဒီယိုရိုက် ကူးနေသူအား မြင်ရပါ့ မလားဟု မေးမြန်းသော အသံနှင့်မြင်ရတယ် ဒီမှာလေ ဟူသော အသံကိုစတင် ကြားလိုက်ရသည်။
ယင်းနောက် ကိုယ်တိုင် ကိုယ် ကျမျက်မြင်ဖူးတွေ့ရန် ကံအကြောင်း တရားပါသူ၊ ကုသိုလ်ထူး၍ ဖူးတွေ့ ခွင့်ရသူတို့၏ အသံများကိုကြားရ သည်။
“ ဟုတ်တယ်ဟေ့၊ ဟုတ်တယ် ဟေ့…ဟိုမှာ တွေ့ရပြီ အနီးကပ်” “ဟုတ်တယ်နော်..ရှင်းနေတာပဲ” “တစ်ခါမှ..မကြွဖူးဘူးနော်” စသော တအံ့တသြဖြင့် ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ဖူးမြော်ခွင့်ရသူတို့၏ ပြောစ ကားသံများနှင့် အတူ ဗီဒီယိုဖိုင် တွင် ရဟန္တာအရှင်မြတ် ၏ ပုံသဏ္ဌာန်ကို များစွာ ထင်ထင်ရှားရှား ဖူးတွေ့ခွင့်ရ လိုက်ပါသည်။
အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင် အား စတင် share လုပ် ပေးပို့သော ဆရာမြင့် မောင်ကျော်၏ ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက် နှာပေါ်သို့ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် နံနက် ၄ နာရီခွဲ အချိန်တွင် နောက် ဆုံးထား ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု ခဲ့ပါ သည်။ ဗီဒီယို ဖိုင်စတင်ထား သည့် အချိန်မှ ယင်းအချိန်ထိ ၁၉ နာရီစာ သာကြာမြင့် ပါသေးသည်။ ကွန့်မင့် ပေးသူများစွာ ရှိလာပြီး ၂၆ ဦးမှာ ယင်းဗီဒီယိုဖိုင်အား share လုပ် သွားကြသည်။
ယင်းနောက် share လုပ် သွားကြသောသူတို့၏ ဖေ့စ်ဘွတ်စာ မျက်နှာများ ပေါ်တွင်လည်း ၀ိုင်းဝန်း ၍ comment (သဘောထားမှတ် ချက်) ပေးသူများစွာ ရှိလာပြီး လူပေါင်းများစွာ ကချက်ချင်းပင် share များ ထပ်မံရယူကာ ဖြန့် ဝေကြသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင် အား စတင် share ပေးပို့သော ဆရာမြင့်မောင် ကျော်ထံဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်း ရာတွင် “မူရင်း တင်ထားတဲ့သူက တော့ အာသာ မင်းပါ။ ဆရာလည်း သူ့ကို ဆက်သွယ်ဖို့ လုပ်နေတာ မရ သေးဘူး။ ဘယ်နေရာမှာ၊ ဘယ် အချိန်လဲ ဆိုတာ ဆရာလဲ မေးမလို့ ဆက်သွယ် ထားတုန်းပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆရာလည်း ဒီလိုမျိုးကောင်းကင်မှာ ဈာန်နဲ့ကြွသွားတဲ့ ရဟန္တာတွေကို မကြာခဏ ဖူးတွေ့ရဖူးတယ်။ ပြော ရရင် တော့ကွာ ဒီဗီဒီယိုဖိုင် ကို ဆရာ ကိုယ်တိုင် လည်း ယုံကြည် လို့တင် ထားတာ။ share လုပ်ပေးတာပေါ့ ကွာ”ဟု မြန်မာပို့စ်သတင်းဂျာနယ် ၏ ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် ကို ပြန် လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာ အားယုံကြည်သက် ၀င်သူလူငယ် တစ်ဦးကလည်း “ကျွန် တော် ရဟန္တာ တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ဖူးမြော်ခွင့် မရပေ မယ့်လည်း ရှိတယ် ဆိုတာကို တကယ် ယုံကြည်ပါတယ်။ တောင်တန်းသာ သနာပြု ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဟော ကြားသွားတဲ့ တရားတစ်ပုဒ်မှာ ဆိုရင်လည်း မြန်မာပြည် မှာ ရဟန္တာ တွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မြတ် တွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်တုန်းက မြန်မာနိုင်ငံ ကိုလာတဲ့ လေယာဉ်မှူး တွေဆိုရင် ကောင်း ကင်မှာ ဈာန်နဲ့ကြွနေတဲ့ ရဟန္တာတွေ လေယာဉ် ဘေးမှာ၊ တချို့က လေယာဉ်ပျံရဲ့ ရှေ့မှာ အုပ်စု လိုက် ရော၊ တစ်ပါးချင်း ရော ဈာန်နဲ့ကြွနေ ကြတာ ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရလို့ အရမ်းကို အထူး အဆန်းဖြစ်ရလို့ မေးမြန်း လျှောက် ထားကြတဲ့ အကြောင်းကို တောင် ထည့်သွင်း မိန့်ကြား သွားတာ ကိုတရားနာခဲ့ ရဖူးပါတယ်။ အခုဗီဒီ ယိုဖိုင်မှာ ဖူးတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ရ အောင်ရိုက် ကူးပေးခဲ့တဲ့ သူကို အထူး ကျေးဇူးတင် ပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုဖိုင် မှာ ဖူးတွေ့ရတာလဲ အရမ်း အံ့သြသလို၊ အရမ်းလည်း ယုံကြည်မိပါတယ်” ဟု မြန်မာပို့စ် သတင်းဂျာနယ်၏သဘော ထားအမြင် တောင်းခံမှုအပေါ် ပြန် လည်ဖြေကြားပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါဗီဒီယိုဖိုင် အားစတင်၍ ဖေ့စ်ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ် တင်ထား ပေးခဲ့သူဟု ဆိုနိုင်သော ကိုအာသာ မင်းမှာ ယခုလ ၈ ရက်နေ့မှ စတင် ၍ယင်းဖိုင်အား တင်ပေးထားခဲ့ခြင်းဖြစ် ပါသည်။
အဆိုပါ ထူးခြားသောရဟန္တာ ပုဂ္ဂိုလ်သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ မည်သည့် အရပ်ဒေသ တွင်ကြွလာသည်၊ မည် သူကယင်း ဗီဒီယိုအား မှတ်တမ်းတင် ခဲ့သည် နှင့် ဖိုင်အား မျှဝေပေးသော ကိုအာသာမင်း အပါအ၀င် ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ဖူးတွေ့ခွင့် ရသူတို့နှင့်ဆက် သွယ်တွေ့ဆုံ နိုင်ရန်မြန်မာပို့စ်အနေ ဖြင့် ဆက်လက်စုံစမ်း နေပါကြောင်း စာဖတ် ပရိသတ်အားအသိပေးလိုပါ သည်။
vedio file http://vimeo.com/30661554 ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။